(၁၀) တန်း အမှတ် စာရင်း ထုတ်ပေးမယ့် ရက် နဲ့ ထုတ်ပေး မယ့် ပုံစံကို ထုတ်ပြန်လိုက်ပါပြီ (ရှယ်ထားပေး ကြပါအုံးဗျို့….) – Let Pan Daily
ယခုနှ စ် တက္ကသိုလ်ဝင်စာမေးပွဲ (၁၀)တန်း အောင်မှတ် စာရင်းများကို သြဂုတ် ၂ဝ ကျော်တွင် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် လျှောက်ထား ထုတ်ပေးနိုင်ရန် မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက စီစဉ်ဆောင်ရွက်နေကြောင်း အခြေခံပညာဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်။
“အွန်လိုင်းကတစ်ဆင့်ဖြစ်ဖို့များတယ် အခုတော့ နည်းပညာ ပိုင်းတွေ ပြင်ဆင်နေလို့ မထုတ်ပြန်သေးတာဖြစ်မယ်။ အမှတ်စာရင်းထုတ်တာကို နိုင်ငံတော်ဝင်ငွေအဖြစ် လုပ်ထားတာဆိုတော့ Paymet တစ်ခုနဲ့သူတို့လုပ်မှာ၊ ငွေကိုနိုင်ငံတော်ဘဏ္ဍာတွေထဲဝင်သွားအောင် ဘယ်လိုစီစဉ်ထားလဲတော့ မသိသေးဘူး။ အွန်လိုင်းနဲ့ပေးဖို့တော့ သူတို့ရည်ရွယ်နေတယ်။ အခုနည်းပညာပိုင်း အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်လုပ်နေတယ်လို့ ကြားတယ်” လို့ အခြေခံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဒေါက်တာတင်မောင်ဝင်းက ပြောပါတယ်။
ကိုဗစ်ကာလဖြစ်သည့်အတွက် လူစုလူ‌‌‌ဝေး မဖြစ်စေရန် အွန်လိုင်းမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးရေးကို စီစဉ်ခြင်းဖြစ်ပြီး တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း အမှတ်စာရင်းထုတ်ယူနိုင်မည့်နေ့ရက် အတိအကျကို မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနက ထပ်မံကြေငြာသွားမည်ဖြစ်ကာ ယခုလအတွင်း ထုတ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကြောင်း ဆိုပါတယ်။ ထို့ပြင် အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင် လက်မှတ်များကို စာမေးပွဲ ဖြေပြီးချင်း ထုတ်ပေးရန် စီစဉ်ခဲ့ သော်လည်း COVID-19 ရောဂါဖြစ်ပွားမှုကြောင့် ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကာ ယခုလအတွင်းထုတ်ပေးရန် ကိုဗစ်ကော်မတီကိုတင်ပြထားကြောင်း သိရပါတယ်။
အခြေခံပညာအထက်တန်းအဆင့်ပြီးမြောက်ကြောင်း အောင်လက်မှတ်များကို ကျောင်းခေါ်ချိန်ပြည့်မှု၊ ကျောင်းစာမေးပွဲများလာရောက်ဖြေဆိုမှု၊ ရမှတ်များ အပါအဝင် စံသတ်မှတ်ချက် ၇ ချက်နှင့်ကိုက်ညီပါက သက်ဆိုင်ရာကျောင်းများမှတစ်ဆင့် ထုတ်ပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း အခြေခံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယ်
(၁၀) တနျး အမှတျ စာရငျး ထုတျပေးမယျ့ ရကျ နဲ့ ထုတျပေး မယျ့ ပုံစံကို ထုတျပွနျလိုကျပါပွီ (ရှယျထားပေး ကွပါအုံးဗြို့….)
ယခုနှ ဈ တက်ကသိုလျဝငျစာမေးပှဲ (၁၀)တနျး အောငျမှတျ စာရငျးမြားကို သွဂုတျ ၂ဝ ကြျောတှငျ အှနျလိုငျးမှတဈဆငျ့ လြှောကျထား ထုတျပေးနိုငျရနျ မွနျမာနိုငျငံစာစဈဦးစီးဌာနက စီစဉျဆောငျရှကျနကွေောငျး အခွခေံပညာဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယျ။
“အှနျလိုငျးကတဈဆငျ့ဖွဈဖို့မြားတယျ အခုတော့ နညျးပညာ ပိုငျးတှေ ပွငျဆငျနလေို့ မထုတျပွနျသေးတာဖွဈမယျ။ အမှတျစာရငျးထုတျတာကို နိုငျငံတျောဝငျငှအေဖွဈ လုပျထားတာဆိုတော့ Paymet တဈခုနဲ့သူတို့လုပျမှာ၊ ငှကေိုနိုငျငံတျောဘဏ်ဍာတှထေဲဝငျသှားအောငျ ဘယျလိုစီစဉျထားလဲတော့ မသိသေးဘူး။ အှနျလိုငျးနဲ့ပေးဖို့တော့ သူတို့ရညျရှယျနတေယျ။ အခုနညျးပညာပိုငျး အဆငျသငျ့ဖွဈအောငျလုပျနတေယျလို့ ကွားတယျ” လို့ အခွခေံပညာဦးစီးဌာန ဒုတိယညှနျကွားရေးမှူးခြုပျ ဒေါကျတာတငျမောငျဝငျးက ပွောပါတယျ။
ကိုဗဈကာလဖွဈသညျ့အတှကျ လူစုလူ‌‌‌ဝေး မဖွဈစရေနျ အှနျလိုငျးမှတဈဆငျ့ ထုတျပေးရေးကို စီစဉျခွငျးဖွဈပွီး တက်ကသိုလျဝငျတနျး အမှတျစာရငျးထုတျယူနိုငျမညျ့နရေ့ကျ အတိအကကြို မွနျမာနိုငျငံစာစဈဦးစီးဌာနက ထပျမံကွငွောသှားမညျဖွဈကာ ယခုလအတှငျး ထုတျယူနိုငျမညျဖွဈကွောငျး ဆိုပါတယျ။ ထို့ပွငျ အခွခေံပညာအထကျတနျးအဆငျ့ပွီးမွောကျကွောငျး အောငျ လကျမှတျမြားကို စာမေးပှဲ ဖွပွေီးခငျြး ထုတျပေးရနျ စီစဉျခဲ့ သျောလညျး COVID-19 ရောဂါဖွဈပှားမှုကွောငျ့ ရှဆေို့ငျးခဲ့ကာ ယခုလအတှငျးထုတျပေးရနျ ကိုဗဈကျောမတီကိုတငျပွထားကွောငျး သိရပါတယျ။
အခွခေံပညာအထကျတနျးအဆငျ့ပွီးမွောကျကွောငျး အောငျလကျမှတျမြားကို ကြောငျးချေါခြိနျပွညျ့မှု၊ ကြောငျးစာမေးပှဲမြားလာရောကျဖွဆေိုမှု၊ ရမှတျမြား အပါအဝငျ စံသတျမှတျခကျြ ၇ ခကျြနှငျ့ကိုကျညီပါက သကျဆိုငျရာကြောငျးမြားမှတဈဆငျ့ ထုတျပေးမညျဖွဈကွောငျး အခွခေံပညာ ဦးစီးဌာနမှ သိရပါတယျ
စဈကိုငျးတိုငျး ကနီ မှာ ဘာတှေ ဖွဈနေ သလဲ ဆိုတာ သိခငျြ သူမြား အ တှကျ